IiCryptocurrencies Archives-Funda ukuRhweba
IMalaysia ijoyina iCDBC Race-Kickstarts Research Process
IBhanki yaseNegara yaseMalaysia, ibhanki ephakathi yelizwe, ibike ukuba itsibe kuloliwe ukuphuhlisa inguqulelo yedijithali yemali yayo. Okwangoku, iprojekthi isekwinqanaba lophando kunye nelizwe kuphela "ukuvavanya isindululo sexabiso" yolu hlobo lwemveliso yezemali.
Ukukhulula imali yedijithali ekhutshwe yibhanki ephakathi (i-CBDC) iyaqhubeka ifumana intetho yezemali yehlabathi. Ngelixa i-China ngoku iziqhayisa ngeyona mveliso iphambili ye-CBDC, amanye amazwe anje ngeMexico, i-Indonesia, kunye neNigeria nawo enze umtsi onentsingiselo kugqatso lwe-CBDC.
I-Bloomberg isandula ingxelo yokuba iMalaysia lilizwe lamva nje elizimeleyo ukuba lingene kwindawo ye-CBDC. Nangona ingakhange ichaze naziphi na izicwangciso ezibambekayo okwangoku, ilizwe laseAsia liqalise uphando lokuqinisekisa isiphumo semali yebhanki yedijithali kumgaqo-nkqubo wemali kwaye ukuba kuya kuba luncedo kuqoqosho, kuphawulwa:
"Nangona isigqibo singenziwanga ukukhupha i-CBDC, siye sagxila kuphando lwethu kwi-CBDC ngobungqina bobungqina kunye novavanyo lokuphucula ubuchule bethu bobugcisa kunye nomgaqo-nkqubo, ukuba kufuneka kukhutshwe i-CBDC kwixesha elizayo."
IBhanki Embindi yaseMalaysia Ngaphambili ibisebenzisana nezinye iiBhanki zeApex ukuphonononga iiNkqubo zeCBDC
Ngeli xesha, iBhanki yeNegara yaseMalaysia isebenzisana nebhanki ephakathi yase-Australia, eSingapore, kunye noMzantsi Afrika ukuphuhlisa ulingo lweentlawulo ezinqamlezayo kusetyenziswa ii-CBDC ezininzi. I-apex bank ijolise ekuqinisekiseni ukuba amaqela abandakanyekayo angazicutha na iindleko zentengiselwano enjalo kwaye enze imijelo efikelelekayo yokuzisebenzisa.
Iprojekthi edityanisiweyo, ebizwa ngokuba yiProjekthi Dunbar, ijolise ekuphuhliseni iprototype ekwabelwana ngayo amaqonga okuvumela ukuthengiselana ngokuthe ngqo komda we-CBDC ngaphandle kwesidingo samaphakathi.
Imali yedijithali yebhanki ephakathi, eyaziwa ngokuba yi-CBDC, luphawu lwedijithali oluphuhliswe kwaye lukhutshwe ngamaziko aphakathi njengoorhulumente kunye neebhanki eziphambili. Oko kwathiwa, abaninzi baye baxoxa ukuba eli nyathelo litsha linokuyichaphazela kakubi inkqubo yezemali kwaye lithintele inkululeko yabantu.
Umxhasi ngelizwi lomyalezo ngu-Edward Snowden odume kakubi, obhale igama elithi CBDCs. "Ukugqwethwa kwe-cryptocurrency" kunye a "Imali ye-cryptofascist," kuqwalaselwe uhlobo lwamandla abalunika urhulumente eluntwini.
tags I-DCDC, Imali ephakathi kwiDigital Bank (CBDC), Cryptocurrencies, Maleyishiya, iindaba
Ngaba kusengqiqweni ukuhlawula i-10% yembuyekezo ngenyanga?
"Enye yeemfihlo ezimbalwa abazaziyo kwaye bambalwa abazisebenzisayo xa kuziwa kwimpumelelo yorhwebo kukuba kufuneka ukukhathalele ngokwenene ukwenza kakuhle. Kwezi ntsuku, ndibona uninzi lwabarhwebi bengakhathali ngokwaneleyo, bengakubekeli phambili ukufunda malunga nokurhweba, kunye nokwenza izizathu ezibuthathaka."- UChris T.
I-Perfectionism - isithintelo sehlabathi lokurhweba
Xa abantu befuna isisombululo kwiingxaki zabo zokurhweba, bavame ukukhangela isisombululo kwiindawo ezingafanelekanga, benengqondo ephosakeleyo. Enye ingxaki kubathengisi abaninzi kukugqibelela. Ngokomzekelo, sivame ukuya kwabo basithembisa i-50% ukuya kwi-100% ngeveki okanye ngenyanga. Ukuba umntu unika uqikelelo lwe-5% yenzuzo ngenyanga, sinokucinga ukuba incinci kakhulu. Ukuba umthengisi wotyalo-mali uthembisa imbuyekezo enkulu ngexesha elifutshane, siyatsaleleka kubo.
Kuthekani ukuba ndikuxelela ukuba i-5% ngenyanga yimbuyekezo efanelekileyo kurhwebo lwakho okanye utyalo-mali, ungavumelana nam? Ngaba ukukhula ngama-60% ngonyaka akulunganga?
Kwiminyaka emininzi edlulileyo, omnye wabacebisi bam kwishishini lezemali wandixelela ukuba, nokukhula kwe-20% ngonyaka kulungile.
Ezikolweni, siyathanda ukubagculela abo benza amanqaku aphakathi yaye sincoma abo bapasa emagqabini. Kunjalo nakwihlabathi lezemidlalo. Ucinga ukuba amaqela ezemidlalo aphumelele yonke imidlalo yawo rhoqo?
Hayi! Kodwa benza kakuhle ekuhambeni kwexesha.
Uninzi lwabo baqhuba kakuhle ebomini bachanekile ngaphantsi kwesiqingatha sexesha.
Ngaba i-10% yeenzuzo ngenyanga iphantsi kakhulu?
Ngoku makhe ndibuze le mibuzo:
Ingakanani ipesenti oyizuzayo kwi-akhawunti yakho yokonga ngonyaka?
Urhola malini kwi-akhawunti yakho yedipozithi esisigxina ngenyanga?
Bangaphi abantu abanokuhlawula amatyala abo kwisithuba sonyaka omnye?
Ukuba uthenga ibhasi, ukuyisebenzisela iinjongo zorhwebo, ngaba kulula kuwe ukubuyisela imali yakho ngonyaka omnye?
Ngaba unokuthenga ipropati kwaye uyithengise nge-100% inzuzo kwiinyanga ezili-10?
Ukuba ufumene isiqalo, ucinga ukuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuba uqalise ukwenza inzuzo?
Nceda uzame ukuphendula le mibuzo ngokwakho, ngokusekelwe kumava obomi bokwenyani.
Ngoku, buyela kumbuzo owenza isihlokwana sokugqibela: Ngaba iipesenti ezili-10 zeenzuzo ngenyanga ziphantsi kakhulu?
Kutheni le nto sihlala singanyanisekanga kwaye singanyanisekanga xa kufikwa kurhwebo lwe-Intanethi?
Ukwenza i-10% imbuyekezo ngenyanga kwi-Learn2.trade crypto signals
Inye into entle malunga norhwebo lwemargin lwe-cryptos kukuba unokwenza imali, zombini kwiimarike zenkunzi kunye neebhere. Awuyenzi imali kuphela xa ixabiso linyuka. Ukuba ixesha lakho kunye nendlela yokusebenza ilungile, unokuqikelela intshukumo ehlayo okanye intshukumo ephezulu kwaye uthathe inxaxheba kuyo.
I-Learn2.trade ibonelela ngeempawu ze-crypto ezisemgangathweni kubarhwebi abanomdla. Isiginali nganye iza nokulahleka kokuyeka kwaye ithathe iithagethi zenzuzo. Ngamanye amaxesha urhwebo luvaliwe ngaphambi kokuba kumiswe okanye kujoliswe kuyo.
Sisebenzisa iintlobo ze-5 zee-odolo kwiimpawu ze-crypto. KukuPhunyezwa ngoko nangoko, okwakwaziwa njengoKwenziwa kweMarike, ukuThenga uMda, uThengiso lomda, uThenga uyeke, kwaye uThengise uZimise.
Ukuvelisa i-avareji ye-2 - 3 izibonakaliso ngosuku, sisebenzisa izicwangciso zomngcipheko ezihlala zijikeleze i-1% ngorhwebo kwaye sizama ukufumana ngaphezu komngcipheko wethu. Njengoko le miqondiso ithunyelwa, siyaqinisekisa ukuba nathi siyayisebenzisa, sisenza oko sikushumayelayo.
Iimpawu ze-Learn2.trade crypto - iintsebenzo zamva nje
Nceda ujonge umfanekiso ongezantsi ukujonga owenziwe mva nje. Uyabona ukuba sinokusebenzisa ilahleko yokuyeka, kwaye sisebenzise iisayizi ezincinci, xa kuthelekiswa nobungakanani beeakhawunti. Akukho ngqiqweni ukubheja kukhulu kakhulu kurhwebo lomntu.
Ungabona kwakhona ukuba sinelahleko kunye neenzuzo. Nangona kunjalo, i-avareji yeengeniso zethu zikhulu kune-avareji yelahleko. Lowo ngumnombo weqhinga elisebenzayo/elithembisayo: Yenza imali eninzi kunokuba uphulukene nayo.
Ke ngoko, ilahleko kunye nokutsalwa phantsi nazo zilawulwa ngokuqinileyo ukuze zingabi naziphumo zibalulekileyo kwiakhawunti. Ezi ntlobo zokutsalwa phantsi azinzulu, ngenxa yokuchacha kwaye ukukhula ekugqibeleni kuyenzeka.
Iimarike zinzima kodwa zinengeniso
Ukwenza inzuzo engaguqukiyo, rhoqo kwiimarike kunzima, kodwa impumelelo inokwenzeka. Xa iimarike zibonakala zinzima, ke sifuna kuphela iindlela zokuyila. Iimarike ziya kuqhubeka nokubonakala zingonwabanga kwaye ziqinile, kodwa siya kuqhubeka sisenza ingeniso kuzo, nokuba kwenzeka ntoni na.
Sijonge i-10% yenzuzo ngenyanga, nangona sisenza ngaphezulu koku kwiimeko ezininzi. I-100% yenzuzo rhoqo kwiinyanga ezili-10 yimpumelelo enomona. Ukuba iipesenti ezili-10 zeenzuzo ngenyanga ziyadityaniswa, iziphumo kwiminyaka embalwa ukuya kweliqela ziya kumangalisa. Ewe, kufuneka uqaphele amandla okudibanisa.
Sijoyine namhlanje, kolu hambo lwengeniso rhoqo, yenyanga.
Nceda ubone umfanekiso ongentla, ukwazi iimethrikhi ezifanelekileyo kunye namanani eziphumo zamva nje zesicwangciso esisemva kwemiqondiso.
Ungasijoyina apha, Iimpawu ezimbalwa zasimahla ze-crypto ngeveki:
Okanye ungatsibela ngaphakathi, kwaye ube yi-VIP yethu kwangoko, kwaye wonwabe zonke iimpawu zethu ze-crypto, ukuya kuthi ga kwiimpawu ze-3 ngosuku. Fumana ufikelelo kwi ukukwazi ukwenza i-10% okanye ngaphezulu ngenyanga.
Nangona, uya kwenza kakuhle ukuqaphela ukuba iziphumo ezidlulileyo ayisosiqinisekiso sentsebenzo yexesha elizayo.
Unokubeka iliso kurhwebo lwethu lweempawu ze-crypto apha: Iimpawu zeL2T zeCrypto kwiMyFxbook
tags Cryptocurrencies, Iimpawu zeL2T zeCryptos, Learn2.trade crypto signals, Uhlalutyo Technical
Ikamva le-crypto kwimidiya yoluntu
Ukuhlaziywa: 10 Julayi 2021
Ukunyuka ngokukhawuleza kwemali yedijithali kwihlabathi lonke kushiye abaninzi bekrobe iintloko. Xa i-Bitcoin ngequbuliso yadubula yagqitha $ 60,000 kunyaka ophelileyo kwaye emva koko yawa phantsi yangaphantsi kwe- $ 35,000, yaphakamisa imibuzo malunga nozinzo lwe-crypto. Ewe kuyinyani ukuba i-crypto ngumzi-mveliso oguqukayo kwaye okhawulezayo, kodwa inokuthi kungekudala ifike kwithafa. Iingcali zikholelwa ekubeni eyona nto iphambili koluzinzo kukukwamkelwa ngokubanzi kwemali ye-cryptocurrency kunye nezinye iitekhnoloji ze-blockchain ezinjengeNFTs.
Kufanelekile ukujonga indlela amajelo osasazo oluchaphazele ngayo ishishini le-crypto kwaye ngokuchaseneyo, ukuze ujonge ngcono indlela ibhloko ye-blockchain enokusebenza ngayo kwinqanaba elikhulu kwixesha elizayo, njengoko ukuthandwa kwe 'Super Apps' yanamhlanje kukhula.
Indaleko kaCrypto kwimidiya yoluntu
Kulula ukubona ukuba bangaphi abantu abasebenzisa imithombo yeendaba ukuxoxa ngokusetyenziswa kwemali ye-imali yedatha. Ithegi #crypto kwiTikTok idibanise ngaphezulu kweebhiliyoni ezi-4 zokujonga. Ithegi #cryptocurrency tag kwi-Instagram ine-11 yezigidi zeeposti. Iyavakala into yokuba abantu abaninzi abaqala ukusebenzisa i-crypto benza oko ngenxa yokubona izithuba kwiiwebhusayithi abazikhangelayo, becinga ukuba i-crypto inyukile ecaleni komzi mveliso weendaba zentlalo.
Ubuninzi be-buzz njengezihloko ezothusayo ze-crypto zifumana, njengomsebenzi wobugcisa wedijithali weNFT othengiselwe wona $ 69 yezigidi kwangoko kulo nyaka, okanye xa umyili we-Twitter ethengisile i-tweet yokuqala njenge-NFT ye phantse i- $ 3 yezigidi, kusekho isithintelo esibalulekileyo setekhnoloji abantu abaninzi abangakwaziyo ukudlula.
Kungenxa yoko le nto ingxoxo yemidiya yoluntu ye-crypto ibaluleke kakhulu, kwaye ikwayiyo nendlela abasebenzisi be-crypto abasebenzisa ngayo imithombo yeendaba zentlalo ekufuneka itshintshe. Inyani yile, ubudlelwane beparasocial obenziwe ziimithombo yeendaba zentlalo ezinje ngeTikTok kunye ne-Instagram azilunganga kwimfundo efanelekileyo, kwaye abantu bafuna indlela ebhetele yokuqonda indlela i-crypto esebenza ngayo.
Ke iyintoni iapp ephezulu, kwaye bangayitshintsha njani imboni ye-crypto?
Igama elithi 'Super App' liqhele ukusetyenziselwa ukuchaza ii -apps zeselfowuni okanye iiwebhusayithi ezidibanisa amanqaku ezinto ezahlukeneyo zokusebenza ziye kumava adibeneyo, eyona idumileyo iyi-WeChat. Abasebenzisi be-WeChat banokuthumelelana imiyalezo ngomyalezo omnye komnye, benze iifowuni, bathenge kwi-Intanethi nangaphezulu, bonke ngaphakathi kosetyenziso olufanayo. Olu manyano olukhulu lwenze i-WeChat yeyona app ithandwayo kwi-China iphela, kunye neebhiliyoni zabasebenzisi.
Elinye lamalinge okuqala okuseka i-app efanayo ephezulu eNtshona yi-Relevnt. I-Relevnt iqokelela amagumbi okuncokola asekwe kumdla axoxa ngemixholo efanayo kwiiportals ukuze abantu abathanda izinto ezifanayo bafumane ngokulula indawo abahlala kuyo. Kutshanje bafikelele kubasebenzisi be-crypto ngengqokelela ebizwa ngokuba yi 'Markets,' ethetha ngomzi mveliso we crypto. Yonke into ekwi-Relevnt ijolise kwimiyalezo yeqela kunye nengxoxo ngokuxoxa kunye nokubhaliweyo. Oku kudala ingqondo enkulu ngokukhawuleza, into etshintsha rhoqo kumzi mveliso wecrypto.
Iindlela eziqhubekayo ngoku kwimithombo yeendaba zentlalo zenza uhlobo lwendlela yokuhamba kweendlela kunye nolwazi. Umzi mveliso wecrypto ulwelo ngakumbi kunolo, kwaye incoko ethe ngqo malunga neendlela zakutshanje kunye nokuvela kufanelekile ngcono kunezithuba ezizodwa. Njengoko ishishini le-crypto liqhubeka nokuvela kunye nemithombo yeendaba zentlalo, siya kubona uxhulumaniso olukhulu phakathi kwezi zifundo zibini zihlala ziguquka.
tags Cryptocurrencies, Ukuhambelana, Imidiya yokuncokola
Iziphumo ze-Cryptocurrencies kwi-Global Ecosystem
Ukuhlaziywa: 21 Disemba 2020
I-Bitcoin yayingaphezulu nje kokuzama xa yaqaliswa kwinqanaba leengxaki zezemali zase-US ngo-2008. Imali yayiyindlela entsha ye-asethi yedijithali ngaphandle kwegunya elilawulayo okanye umlawuli. Endaweni yoko, i-BTC ixhomekeke ngokupheleleyo kwinkqubo yencwadi esasaziweyo kunye nenethiwekhi yoontanga abajongene nokugcina umkhondo wayo yonke imicimbi.
Sele lixesha okoko kwenziwa i-Bitcoin, kwaye iiyunithi ngoku zixabisa imali eninzi xa kuthelekiswa neentsuku zayo zokuqala. Njengoko i-cryptocurrensets ifumana indawo eyomeleleyo kuwo onke amashishini, ixabiso layo liyakhula ngokuthelekisa. iGaming, umzekelo, ikubonile ukunyuka okukhulu kweekhasino ze-crypto kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ndwendwela iCasino Rocket uluhlu olubanzi lwe Yekhasino online Australian kufutshane nawe.
Ukunyuka kunye nokunyuka kweBitcoin
I-Bitcoin iye yaguquguquka kakhulu kwiminyaka. Ukususela ekuxabisweni kwe- $ 0.008 ngo-2010 ukuya kwi-0.08 yeedola ngaloo nyaka. Kwaye ukunyuka okulandelayo ukuya kwi-31 yeedola ngo-2011, uhambo lwalunomdla. I-frenzy yaqala kwi-2013 xa i-BTC yaphula i-1,000 177 yeedola okokuqala kwimbali yayo emfutshane. Kwangelo xesha, amaxabiso ehla aya kwi-XNUMX yeedola kwiinyanga ezilishumi elinambini ezizayo!
Nangona kunjalo, eyona bubble inkulu kwimbali yemali mhlawumbi yavela ngo-2017/18 xa inqanaba lokucela linyuke laya kuthi ga kwi-20,000 yeedola. Ixabiso laye lawa nje kwangoko ngaphantsi kwe- $ 10,000 yamanqaku ngelixa usondela kufutshane ne- $ 5,000 kungekudala emva koko. Ngenxa yokuguquguquka kweBitcoin, kuye kwapapashwa ii-obituaries ezingama-382 kule minyaka idlulileyo, ukuzama ukucacisa izizathu zokuba i-BTC isilele ukusilela. Nangona kunjalo, abathembekileyo babonakala ngathi bahlala bengoyiki kwezi ngxoxo.
Ukusukela nge-Septemba ka-2020, ngaphezulu kwe-573,063,000 ye-Bitcoin intengiselwano irekhodwe kwi-blockchain, kwaye icandelo elikhulu lale ntengiselwano livela kumzi mveliso we-iGaming, apho abantu babonakala ngathi banomdla kwi-BTC. Kwi-avareji, ngaphezulu kwama-350,000 eentengiselwano ezintsha zingena kuthungelwano yonke imihla, kwaye uninzi lwazo lufika kwiindlela zokungcakaza ezikwi-Intanethi.
Ishishini lesandla kushishino olunikezela ngesitokhwe se-bitcoin kwithebhulethi. Utyalomali kwezemali itekhnoloji yedijithali.
Iiperks zenkqubo yolawulo oluhanjisiweyo
Kukho ii-casino ezingaphezu kwe-200 ezibhalisiweyo kwi-blockchain, ngelixa ii-akhawunti ze-BTC ezizodwa ziphakame phantse i-60% kwishumi leminyaka elidlulileyo. I-Bitcoin ivelise lonke uluhlu lwee-cryptocurrensets ezisebenza ngomgaqo ofanayo. Ukunyuka kweBitcoin akuphelelanga nje ekuvuleleni indlela iiasethi ezintsha zedijithali kodwa kukwazisa ii-blockchains.
Itekhnoloji yeBlockchain ishenxisa isidingo somlawuli kwaye endaweni yoko isebenzisa uthungelwano lwababhali abasemagunyeni ukurekhoda ukuthengiselana. Ingqondo yoguquko ngoku iyasetyenziswa ngaphaya komda wee-cryptocurrensets kumashishini onke. Nangona i-blockchain ingeyonto intsha, kwaye iingcambu zayo zilandelwe ukuya kwi-1994, iBitcoin yazisa le nkqubo, iyinika ingqesho entsha yobomi!
tags block Chain, Cryptocurrencies, Inkqubo yolwabiwo
4 Isilumkiso seentsomi zeCrypto ezivela kwiCrypt
Ukuhlaziywa: 6 Novemba 2020
Amagqwirha, i-vampires, kunye ne-ghouls. Ezi zilwanyana zaseHalloween azinanto kuyo yonke into embi kakhulu yeBitcoin: ukulahlekelwa yigolide yedijithali kwingozi yengozi okanye ukungahambi kakuhle. Ngokuqhelekileyo sinokukuva ukhala kwiscreen sakho ngoku.
Ukuwonga ixesha leHalloween, sikhangela amabali amane ashukumisayo omqolo welahleko yeBitcoin ekhohlakeleyo. Sikwaphosa into encinci yokuphatha ukuya esiphelweni kwaye sityhile ukuba ungakwenza njani ukubulala kwi-crypto ngeakhawunti yeLonghornFX, ngaphandle kokuthenga nayiphi na iBitcoins. Ngaba unomdla? Funda ukuze ufumane okungakumbi.
1. IT guy chucks $ 127m Bitcoin in inkunkuma inetyhefu
Ingcali ye-IT yase-Bhritane u-James Howells waqala ukumbiwa kwe-Bitcoin kwilaptop yakhe ngo-2009 kwaye ngo-2013 wayeqokelele i-Bitcoins ezinomdla ezingama-7,500 XNUMX. Wathengisa i-laptop kwi-eBay kodwa wabambelela kwi-hard drive ngethemba lokuba i-Bitcoins yakhe iya kunyuka ngexabiso. Kodwa ngelixa wayecoca indlu yakhe kamva kwakuloo nyaka, ngempazamo wayilahla kude imoto, eyaphela ikulahlwa kwindawo yokulahla inkunkuma yaseWales. Akuyiqonda impazamo yakhe, uHowells wazama ngandlela zonke ukufumana imvume yokugqogqa inkunkuma. Isicelo sakhe saliwe ngelithi sasiyingozi ngenxa yetyhefu yokulahlwa kwenkunkuma, kunye nje ngokuchasene nomthetho.
Ukutyeba okuninzi okuhle obekuya kumenza, kunjalo. Ngeetoni ezingama-50,000 2017 zenkunkuma eyongezwa kwisiza minyaka le, ukukhangela i-hard drive encinci bekungayingxaki enkulu kunokufumana inaliti kwifula yefula. Okwangoku, kunokuba kufanelekile ukuba kwenziwe. Kuqikelelwa ukuba malunga no-7,500, xa uHowell eqonda ukuba wenze ntoni, ii-Bitcoins zakhe ezingama-127 XNUMX zazinokuxabisa ngaphezulu kwe-XNUMX yezigidi zeedola.
2. I-Aussie ilahlekelwa yi- $ 7m yeBitcoin emva kokutyala imali
Ngomzuzu wobunzima baphakathi kobomi, owayesakuba yintatheli yase-Australia u-Derek Rose uthathe isigqibo sokwenza into eya kuba yinto engenakwenzeka ngabaninzi. Wayirhoxa yonke imali yakhe eyi- $ 70,000 yobomi kwaye wayityala yonke kwiBitcoin. Ukubona ukuba ikomkhulu lakhe lokuqala lalikhula ngokucacileyo nge-Bitcoin boom ka-2016, uRose waqala nokuboleka imali ethe kratya ukuze andise utyalomali, kwaye kungekudala wayefumana umvuzo osisiqingatha sesigidi seedola ngosuku.
Kodwa endaweni yokumamela umcebisi wakhe wezezimali kunye nabahlobo abamkhuthazayo ukuba aphumeze imali ngelixa ukuhamba kulungile, uRose uqhubeke nokukhwela loo maza kwaye wachitha ngaphezulu kwemali kwi-crypto. Ke ukuphazamiseka kweKrisimesi yango-2017 hit kwaye uRose wabona iakhawunti yakhe yezigidi zeedola ithatha ukubetha okukhulu. Waphulukana ne- $ 7 yezigidi ngelo xesha. Ngombulelo uRose akazange aphulukane nayo yonke into. “Esi yaba sisibetho esikhulu, kodwa khange indiphelise […] ndisenza bhetele kutyalo-mali lwam kunokuba bendinokuhlala ukuba ndibekwi-index fund.” Ukuziphatha kwebali: into enyukayo, kufuneka yehle. Akukho rally ye-bullish iya kuqhubeka ngonaphakade.
3. I-Tech journo ilibala i-PIN ye-wallet ye-Bitcoin
Ngamanye amaxesha nezona teknoloji zithembekileyo zehlabathi zenza iimpazamo ezinkulu. Emva kokuqokelela i-30,000 yeedola kwii-Bitcoins, umhleli wephephancwadi elinentambo uMark Frauenfelder waphulukana nokufikelela kwisipaji sakhe se-crypto. “Ndibhale i-PIN khowudi yam kunye nembewu yokubuyisela kwiphepha elinye. Bendicwangcisela ukuyinkcinkca imbewu ngetsimbi ndiyifihle, kodwa phambi kokuba yenzeke inkonzo yam yokucoca indlu yalilahla iphepha, ”ucacise watsho.
UFrauenfelder wayekulungele ukumanga ama-Bitcoins akhe xa efika ekugqibeleni wadibana nesifo senhlanhla. Kwiinyanga ezilishumi elinesithathu emva kokuphulukana ne-PIN yakhe, uMarko waziswa ngo-Saleem Rashid, oneminyaka eli-15 ubudala owenza iikhowudi e-UK. Ngoncedo lukaSaleem, uMarko wakwazi ukuqhekeza isipaji sakhe se-crypto kwaye wakhupha ngempumelelo iPIN yakhe emva koko wafumana iBitcoins. Sibheja ukuba uFrauenfelder akazukubeka endaweni yakhe i-PIN entsha nangaliphi na ixesha kungekudala!
4. Umyili weSoftware wosula i $ 20k
Xa i-Bitcoin yaqala ukubangela isiphithiphithi kwiwebhu ngo-2010, umphuhlisi wesoftware esekwe e-Atlanta uSyl Turner wacinga ukuba angazama isandla sakhe kwimigodi kwaye akwazi ukuzenzela iiBitcoins ezimbini. Njengoko i-Bitcoins yayixabisa iipeni ngelo xesha, uSyl akazange abanike ingcinga eninzi kwaye ekugqibeleni wagqibela ngokugcina ikhompyuter yakhe kwimigodi.
Ngokukhawuleza phambili kwiminyaka embalwa kamva kwaye ngequbuliso uSyl ubona isilumkiso seendaba esivelayo kwisikrini sakhe: I-Bitcoins ngoku ixabisa i-10,000, XNUMX yeedola! USyl wadubula ngqo waya kwigumbi eliphezulu ukuze afumane ikhompyuter yakhe eleleyo. Uyifumene le nto ebeyikhangela kodwa wathi xa ebopha ikhompyuter, waqonda ukuba usule ngempazamo i-hard drive, ethetha ukuba isitshixo sakhe se-crypto wallet siphelile. Impazamo enye yabiza i-Syl $ 20,000, ubuncinci. Ukuba uSyl wayenokufikelela kwisipaji sakhe se-crypto kunye ne-HODLed, usenokuba wabona iBitcoin yakhe inyuka kakhulu, iphakame kakhulu.
Ukwenza inzuzo kwi-Crypto kwenziwe kwalula
Ngombulelo, kukho indlela elula kwaye engabizi kakhulu yokwenza iBitcoin, ngaphandle komngcipheko wokuphulukana needrive hard okanye iiPIN ezintsonkothileyo kwizipaji ze-crypto. Ngokurhweba ngeekhontrakthi zoMmahluko (i-CFDs) kwiLonghornFX, ungazuza ngaphezulu kwe-35 i-cryptos ngokuthengisa ukuba ixabiso le-asethi ye-crypto esezantsi iya kunyuka okanye yehle.
Urhwebo ngeBitcoin, i-Ether, iRipple, kunye nezinye ii-altcoins ezidumileyo, zonke zinokuphakama kwe-1: 500. Vula iakhawunti yasimahla yeLonghornFX kwaye urhwebe ukusuka kwidiphozithi eyi- $ 10!
tags block Chain, BTC, Cryptocurrencies, Cryptos, upapasho ndaba zekhampani